Akụkọ - 3D metal wall art (2)
3D Ogwe Mgbidi Mgbidi
Ihe Mgbidi Mgbidi Ọkpụkpụ
Elekere Mgbidi Igwe
3D mgbidi mgbidi Arts (2)
Ihe nchara eji eme ka mgbidi aluminom na-ewu ewu ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-ekpebi ịkwalite ụlọ iri nri ha, ime ụlọ ha, wdg.
Nweghị ike iche n'echiche ọtụtụ ihe dị jụụ nwere ike iji aluminom mee. O nwere ike ịbụ obere mma ma ọ bụ nnukwu mgbidi, nke na-ekpuchi mgbidi ahụ dum. Ọzọkwa, ihe aluminom bụ ngwaọrụ zuru ụwa ọnụ maka ịchọ mma mgbidi dịka ha dabara maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla yana atụmatụ agba ọ bụla. Ọ dị ezigbo mma ịnweta ụfọdụ3D mgbidi mgbidi nkana mgbidi nke sitere na aluminom dị ọcha, n'ihi na ọ na-egbuke egbuke na mgbe emechara ya nke ọma. Ibe ihe osise na mgbidi nwere ike gbanwee ikuku na ọnọdụ n'ime ụlọ ị na-eme atụmatụ itinye nke a.
N'ime onyinye anyị, ị ga-ahụ ihe niile ịchọrọ, ụdị dị iche iche 3D metalwall nkà na ọtụtụ usoro, yabụ onye ọ bụla ga-ahụ ihe dabara gị nke ọma.
Ngwurugwu mgbidi igwe anyị niile dị mfe iji wụnye ma na-adịgide adịgide. Ihe kachasị mma bụ na ha dabara n'ụzọ zuru oke n'ime ụlọ ọ bụla ịchọrọ.Ha na-agbakwunye ụdị kwesịrị ekwesị nke kwekọrọ na ọnọdụ gị ma ọ bụ ụdị ị masịrị gị. Ebe ọ bụ, kwa ụbọchị metal mgbidi nka na-aghọwanye ewu ewu, egbula oge, ma nọrọ n'ụzọ ị ga-ahọrọ ụfọdụ na weebụsaịtị anyị.
Gara aga Ajụjụ
Mma ụlọ ihe ndozi bụ ọkachamara mbụ emeputa nke 3D metal mmanụ sere na China na nke kacha mma mma niile time.You nwere ike dị ịtụkwasị anyị obi ma kwere na anyị pụrụ iche na ihe osise nwere ike wetara gị nnukwu ihe ịga nke ọma!
Mpaghara Industrial Chigang, Hanjiang Dist, Putian, China